Valve Anti-cheat: zvaunofanira kuziva nezvazvo ► Counter Strike 1.6 Download
Valve Anti-cheat: chii chaunofanira kuziva nezvazvo?
Hongu, tese tinozviziva izvozvo Counter-Strike 1.6 ine mamiriyoni evateveri pasi rose. Zvakakosha kutaura kuti pane zvakawanda chokwadi, izvo zvaunofanira kuziva. Uye imwe yacho inopesana nekubiridzira. Saka, chii chaunofanira kuziva nezvazvo? Ngatitaurei nezvazvo zvakanyanya!
Kubiridzira kunonzi sei uye sarudzo ipi inoita Valve?
Hongu, tese tinoziva Counter-Strike Haisi chete varaidzo yakanaka - zvinosuruvarisa, inzvimbo, apo vatambi vanobiridzira zvakare. Saka izvi hazvina kunaka kune vatambi vane mutoro. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti kubiridzira kunowanzo kunzi "kubira" zvichireva zvirongwa kana "hacks". Uye zvechokwadi, hazvina kuoma kuona izvozvo Counter-Strike 1.6 waivewo mumwe wemitambo iya apo vatambi vaibiridzira. Hongu, hazvina kunaka. Saka uyu mubvunzo? Chii chinoita Valve? Iyi kambani yakawana sarudzo huru - ivo vakashandisa anti-cheat system. Uye vakaitumidza kuti Valve Anti-Cheat (VAC).
Uye zvechokwadi, tinofanira kupindura mubvunzo: chii chiri chinangwa chegadziriro ino? Saka, inhau dzakanaka kune vatambi vane mutoro - iyo account yevatambi vari kubiridzira inogona kuvharirwa zvachose kubva kune ese VAC-yakachengetedzwa maseva.
Paive neshanduro shoma dzeVAC
Ehe, zvakakosha kutaura kuti pakanga paine mashoma mavhezheni eVAC. Uye zvechokwadi, zvakakosha kutaura pamusoro pekuti inoshanda sei. Semuenzaniso, kana isu tichitaura nezve yekutanga vhezheni yeVAC, isu tinofanira kutaura kuti kurambidzwa kwakatora kanenge pakarepo mushure mekuonekwa. Uye idzi hadzisi dzese nhau - zvakakosha kuti uone zvakare, kuti mubiridzira aifanira kumirira makore maviri kuti account irege kurambidzwa. Hongu, inguva yakareba chaizvo, saka munyengeri ane nguva yakawanda yekufunga nezvezviito zvake. Yakanga iri nzira yakanaka kwazvo yekudzivisa kubiridzira.
Kune yechipiri vhezheni yeVAC. Asi ipapo isu hatina nhau dzakanaka kune vatambi vane mutoro, nekuti mune iyi vhezheni vanyengeri havarambidzwe otomatiki. Saka, mune iyi vhezheni, kambani ichangoisa mutemo we 'kunonoka kurambidzwa. Saka, nechisarudzo ichi, Valve inotarisira kuziva uye kurambidza vabiki vakawanda sezvinobvira.
Ehe, zvakakosha kuona kuti senge chero software yekuona system, mamwe mabibi haaonekwe neVAC.
Saka, tese tinoziva, kuti kubiridzira kwakaipa… Kwakaipa kwazvo kune vatambi vane hunyanzvi. Saka, kunyara iwe, kana iwe uri kubiridzira. Usava munyengeri. Asi izvi hazvisi zvose - isu tinofara nokuti kambani yeValve yakawana zvisarudzo zvinoshamisa zvevanobiridzira - kambani iyi yakagadzira anti-cheat system inonzi Valve Anti-Cheat (VAC). Iyi sisitimu ine shanduro shoma, uye imwe neimwe yadzo ine chinangwa chekudzivisa kubiridzira mumutambo uyu. Saka, isu tinofara chaizvo kuti Valve ikambani ine mutoro. Asi handizvo zvoga – tinoda kuyeuka zvakare, kuti kubiridzira kwakaipa kwazvo, saka haungoite izvi. Saka, iva nemhosva iwe pachako uye nevamwe vatambi - usabire, tamba nenzira yakajeka.
Isu takagadzirirawo chimwe chinyorwa chako, kana iwe uchida kuvandudzwa kweCS, unogona kuverenga pano: budiriro Counter-Strike 1.6
Tagsanti cheat valve counter strike 1.6 counter strike 1.6 anti-cheat counter strike 1.6 download counter strike 1.6 vharafu-anticheat cs 1.6 cs 1.6 anti-cheat cs 1.6 download Hack anticheat anti-cheat rollers chii chinonzi vharafu anticheat